Akhri | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 173
Masaajidka ugu weyn Qaaradda Yurub, ayaa maanta laga furay Xarunta Wadanka Ruushka ee Magaalada Moscow, iyadoo ay mar qura ku tukan karayan illaa 10 kun oo ruux. Masaajidkan oo laga hirgeliyay bartamaha Magaalada Moscow, ayaa noqonaya Masaajidka ugu weyn uguna dheer ee Masaajida ku yaala dalalka Yurub, sida uu sheegay Vladimir Putin, Madaxweynaha Ruushka. Madaxweynaha, ayaa maanta xariga ka jaray Masaajidkan, wuxuuna sheegay Islaamku in uu ka mid yahay dhaqan ahaan diimaha ay dadka Ruushku aaminsan yihiin. Madaxweynuhu wuxuu ammaanay dagaalka uu Islaamka kula jiro ururada mayalka adag ee dunida ka jira, isagoo tilmaamay dhibaatada ay gaysanayan xagjiriinta inaanay ka …
Sahan uu sameeyay taleefishinka CNN iyo hay’ada ORC International ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba 30 dadka Maraykanka ah ay aaminsan yihiin in Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu yahay nin Muslim ah halka boqolkiiba labaatana la sheegay in aysan aaminsanayn in madaxweynaha Maraykanka uu ku dhashay wadanka uu madaxda ka yahay. Donald Turmp oo ah nin warfidiyeen caan ka ah dalka Maraykanka ayaa taageerayaashiisa waxa ay kala bar aaminsan yihiin in Obama uu haysto diinta Muslimka halka boqolkiiba 43 taageerayaasha xisbiga Republicanka ay aaminsan yihiin in uu Obama muslim yahay. Ninka lagu magacaabo Trump oo si weyn uga hadla arrimaha dalka …
Dalkaan dadkiisa aaway? Waa su’aal muhiim ah in la iswediiyo oo ay iswediiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Dal walbo oo caalamka ka mid ah waxaa dhistay dadkiisa. Hadaba in la isweydiiyo soo muhiim ma ahan oo laga wada hadlo xalka dadka iyo dalkaan. Waxan kawada marqaato nahay in dad badan badaha ku qubteen oo ay dhammaadeen. Hooyo badan ayaa wiilkeeda weysay. Haku dhinteen tahriib mise dagaalo sokeeyo. Runtii dhibaatooyinka ka dhacay dalka Soomaaliyeed halkaan laguma soo koobi karo balse waxwalbo waxaa wanaagsan in dib la isku garto. Sheekh Maxamed Idiris oo ka mid ah culuma sidda aadka loo yaqaano ayaa wuxuu ka …
Duhur kasta waxaan tagi jiray masaajidka ugu weyn xaafadda magaaladii aan deggenaa ee Muqdisho, si aan ugu nagaado, maxaa yeelay qado aan cuno ma haysan, waxaan ahaa arday barta cilmiga la xariira diinta Islaamka, kana soo tagay gayigiisii iyo qoyskii uu ku soo dhex barbaaray. Labbiskaygu wuxuu u muuqday mid dhammaad ah. Inta badan toddobaadkiiba labo ama saddex mar ayaan gacanta ku dhaqan jiray, masaajidkana waan ka qubaysan jiray, oo hoygayga keliya ee aan hargalo ayuu ahaa. Waxaan cuno hadba qoys ayaa i casuumi jiray, oo igu deeqa wax aan markaasi quuto. SufismWaxaan u go’ay barashada diinta, qof kale xiriir …
Han-weynidu ama in la hawoodo oo meel fog la higsado lana hindiso siddii loo gaari lahaa waa kalinta loo maro hormarka iyo guusha. Dadka hormarka sameeyey ama ka gaaray nolashooda meel loo hanqal taago waxay ahaayeen dad hanweyni badani ku jirto, meelaha ay ka fikiraana ay tahay meelo sarsare ay qayrkood ku dharoofin inta badan. Dadka qaarbaa hankoodu yahay inay noolaadaan oo kaliya, qaar baa ku hamiyay inay masruuf u helaan naftooda, kuwo kallana ku fikira inay reerkooda biilaan ama meel biilka u saaraan, qaarbaa ku fikira inay wax barasho ka gaaraan meesha ugu saraysa. Qaar kallana hanweynidoodu siisaa inay …
Hogaamiyaasha Soomaaliya waxay la deris yihiin hogaan guracan. Sidda qolooyinka diimaha isticmaalayo maanta iyo kuwa qabyaaladda ay hogaanka u hayso. Haddii aan raggaas ku tilmaamay hoggaan guracan, waa yaabe, side hoggaanka fiicani u egyahay? Sun Tzu (1500 B.C.), buuggiisa ‘The Art of War’ hogaamiyaha fiican wuxuu ku tilmaamay qof caan ku ah: garaad, kalsooni, bini’aadanimo, geesinimo iyo adayg. Du Mu (803 B.C.) oo ka mid ahaa raggii sharaxay buuggaas, wuxuu yiri: “garaadku’ waa awoodda wax lagu qorsheeyo ‘bini’aadanimadu’ waxay la xiriirtaa jacayl iyo naxariis loo hayo shacabka; ‘geesinimadu’ waa in fursadaha laga faa’iidaysto, ‘anshaxu’ waa in kala danbayn iyi nidaam …
24kii sano ee ugu danbeysay waxay dhalinyaradda Soomaaliyeed ku naf waayeen Safaradda tahriibka ah, gaar ahaan saxaraha u dhaxeeya dalalka Sudan iyo Libya, iyo badda dhextaala Libya iyo Malta illaa iyo Talyaaniga, dhalinyaradaas oo habab koox iyo shaqsi ah ba safarada halista u wajahay ayaa damaacigoodu ahaa inay gaaraan dalalka Yurub si ay u helaan nolol ay ka door bideen marxaladaha ku haysatay deegaanada gudaha wadanka Soomaaliya. Wallow uu tahriibku yahay marwalba fikir halis badan oo qalad ku ah dhalinyarada inay wajahaan. Qoysas badan ayaa dareemay xanuunka geerida dhalinyaradaas, qaar kale ayaa wali la murugeysan ubadkooda oo ku dhibaateysan …
عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ Assalamu Calaykum Shalay waa maalin tagtay oo aan kugu soo laabanayn waxii ay guul lahayd iyo khasaareba way tageen mana soo ceshan kartid Maanta waa maalinta ugu qaalisan cimrigaaga waana raasamaalka ugu weyn ee aad haysato waana maalinta ugu qaaalisan noloshaada. Qiimaha noloshaada oo dhan waxay ku xeranyihiin saacadaha yar ee kuu jira maanta. Noloshaada qiimaheeduna waa waxa ay noqonaysaa sidda aad hadba ugu faa’idaysato oo keliya waayo manta markaad ka faaidaysato berrina waad ka faa’idaysan iyo cimrigaaga oo dhan. Laakiinse hadaad maanta lumiso beritana waad luminaysaa kadibna sidaas ayaad ku lumisay noloshaadii oo dhan. Waxaa la yirri …
Waxaa maalmihii horre inta aan la gaarin doorashada maamulka Jubbaland soo baxaayay dul duleelo ku salaysaneed in awood la isticmaalay, awoodaas oo ah in Itoobiya ay xer-xertay dad badan oo asal ahaan ka soo jeedo Jubbooyinkaas. Sawabta loo xer-xeray dadkaas wax kalle ma ahan waa aragtiyo ku salaysan, aragtiyo siyaasadeed. Maanta oo ay tahay Agoosto 15, 2015: Baarlamaanka Jubbaland ayaa si aqlabiyad leh ku doortay Axmed Madoobe in uu noqdo Madaxweynaha Jubbland 4-ta sano ee soo socota. Waxayna doorashadaas u dhacday sidda tan: Maxamed Cusmaan Yuusuf : 0 Cusmaan Xaaji Feyruus : 2 Hilowle Maxamed Aadan : 2 Axmed Maxamed …